'पहिलेदेखि नै लोभलाग्दा खेल प्रदर्शन गरेकै कारण यसपाली पनि ब्राजिललाई समर्थन' : पूर्वकप्तान श्रेष्ठ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
‘पहिलेदेखि नै लोभलाग्दा खेल प्रदर्शन गरेकै कारण यसपाली पनि ब्राजिललाई समर्थन’ : पूर्वकप्तान श्रेष्ठ
Posted by Pariwartan Devkota | ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १६:१९ |
२०१८ फिफा विश्वकप फुटबलको सुरु हुनै लाग्दा विशेष चर्चा सुरु भइसकेको छ। गाउँ टोल र गल्लीमा फुटबलकै चर्चा हुने गर्छ। सरल र बुझ्न सहज भएकै कारण पनि फुटबलमा युवा मात्र होइन बच्चादेखि बूढाबूढीसम्मको विशेष आकर्षण छ। फुटबलप्रेमीले आफूलाई मन पर्ने टिमको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।कतिपयले समर्थन गरेको टिमको जर्सीसमेत लगाएर फोटो पोस्‍ट गर्दै छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिम खेलाडीहरूलाई समेत फुटबलले राम्रो छोएको छ। अधिकांश खेलाडीले ब्राजिललाई समर्थन गरेका छन् भने अर्जेन्टिना, स्पेन, जर्मन र इङल्यान्डले समेत नेपाली खेलाडीलाई प्रभाव पारेको छ।
यसैबिचमा हेडलाईन नेपालका लागि पत्रकार परिर्वतन देवकोटाले नेपाली राष्ट्रिय टिमकाका पूर्वकप्तान राकेश श्रेष्ठसँग यसै विश्वकप फुटबलको आशपासमा कुराकानी गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ नेपाली फुटबल टोलीका पूर्वकप्तान राकेश श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंश :
राकेश जी, विश्वकप फुटबल २०१८ मा तपाईं कसको समर्थक ?
अरु पनि राम्रा टिम खेल्दैछन्, ब्राजीललाई नै किन समर्थन ?
-छन्, अरु पनि राम्रा टिम छन्, राम्रा खेलाडी छन् तर मनभित्र चाहिँ ब्राजील बसेको छ विशेष त रोनाल्डो मनमा बसेका खेलाडी हुन् । रोनाल्डो, नेइमार जस्ता खेलाडीको खेल्ने कलाकै कारण पनि ब्राजिलको समर्थन गर्छु ।
अघिल्लो विश्वकप अर्थात, विश्वकप फूटबल २०१४ मा चाहीं कसलाई समर्थन गर्नूभयो ?
-म पहिलेदेखि नै ब्राजिल समर्थक खेलाडी हुँ । ब्राजीलमा खेल्ने खेलाडीहरुको एउटा विछट्टै कला छ, जसले सबैको मन जित्छ ।
विश्वकपमा अर्जेन्टिना, ब्राजील लगायतका विभिन्न टिमहरुको समर्थनमा र्यालीहरु पर्दशन गरिएको छ , सामाजिक सञ्जालमा पनि यसले निकै व्यापकता पाएको छ, यसमा के भन्नुहुन्छ ?
-वास्तवमा त फुटबल खेल अरु खेलहरु जस्तो कठिन हुन्न, यो मेरो अनुभव पनि हो । फुटबलको स्वभाव नै सरल र बुझ्न सहज छ । त्यसकारण पनि यसमा युवायुवतीहरु मात्र नभई बालबालिका, वृद्धवृद्धाहरुमा पनि यसको चासो छ । टिमको समर्थनमा र्यालीहरु निस्कनु सामान्य नै हो नि ।
अन्त्यमा, केही थप्नुहुन्छ ?
-म नेपाली फुटबल टिमका पूर्वकप्तान अथवा खेलाडी भएकै कारण पनि फुटबलप्रति निकै माया छ, सम्बन्ध छ । सबै नेपालीले बुझ्न सक्ने यो खेलमा समर्थन जनाऔं, मनोरञ्जन गरौं । फिफा विश्वकप २०१८ उल्लासका साथ मनाऔं भन्न चाहन्छु ।
Previousनेकपाले प्रदेश अध्यक्ष स्थायी कमिटी सदस्यबाट बनाउने, दाबेदारमा को को ?
Nextप्रधानमन्त्री ओली तिब्बत सम्म पुग्ने , कनेक्टिभिटी सगँ सम्बन्धित एक दर्जन सम्झौताको अपेक्षा
‘हामीसँग क्षमता छ, योजना छ’ : ओली
८ असार २०७४, बिहीबार १७:५०
सोमबार भएका सडक दुर्घटनामा ५ जनाको मृत्यु
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १४:५१
गण्डकी प्रदेशको गुहार- ‘सरकार ! काम गर्न गाह्रो भयो, भवन र जग्गा हस्तान्तरण गरिदेउ’
१७ श्रावण २०७५, बिहीबार ०९:५६
फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव
१४ श्रावण २०७५, सोमबार २०:१५